Kedu otu Bochum gị nwere ike isi metụta SEO gị | Martech Zone
Eeh, Bochum gi nwere ike inwe mmetuta na SEO gi. O juru ya anya? Otu a ka otutu ndi mmadu di mgbe ha mutara na nhazi ha nwere ike imetuta ikike ha iru iru SERPs di elu. Mana gịnị mere? Oleekwa otú?
Gbanyụọ, atụmatụ Bochum gị na-emetụta ụzọ atọ dị mkpa nke niile metụtara ọkwa gị: Nche, Ọnọdụ, na Ọsọ. Anyị ga-enye gị nkụda mmụọ zuru oke ọ bụghị naanị otu etu atụmatụ Bochum gị si emetụta ihe ndị a, mana ihe ị nwere ike ime iji bulie Bochum kacha mma maka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya, yana otu ị ga - esi selata ihe ndị nwere nsogbu ma ọ bụrụ na ị zutere ha.
Gị Bochum Atụmatụ Nche
Nchebe bụ otu n’ime nsogbu kachasị mkpa ị ga - eche maka oge ị na - aga webusaiti, ma ị na - eme ihe SEO ma ọ bụ na ị naghị! Isi iwu nke isi mkpịsị aka bụ nke a: obere ebe nrụọrụ weebụ gị dị ntakịrị, o yikarịrị ka ọ ga-enweta ya. Ma oburu n’icho onye ozo, o yikarịrị ka enwere ike gbanwee ọdịnaya gị n’ụzọ dị otu a ka ị ghara ida ọkwa ọ bụla ị nwetagoro.
Yabụ, ebe nchekwa adịghị mma apụtaghị na weebụsaịtị gị ga-enwe nsogbu ịnweta ọkwa, ọ pụtara na ihe egwu gị adịkwa nhazi ọkwa mechara dị elu. Maka nke a, ihe mbụ ị kwesịrị ịlele ndị na-eweta Bochum ọ bụla bụ nchekwa ha. Ha na-enye nchebe gbanwere n'ime ọnụahịa ha? Ha na-enyocha faịlụ gị? N'aka nke ọzọ, ha na-enye nchebe ka ukwuu maka ego ọzọ? Hà ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na hacked ebe nrụọrụ weebụ gị? Buru ọtụtụ mgbanwe dị ka ị nwere ike tupu i kpochie onwe gị na ngwugwu ngwugwu ọ bụla.
Ọ bụrụ na atụmatụ Bochum gị anaghị enye nchebe ya ọzọ ma ị banyelarị, meenụ mgbe niile ụfọdụ na chebe weebụsaịtị gị megide hackers dị ka mma i nwere ike. Gbakwunye plugins nchebe, ịmepụta okwuntughe echedoro, na iji usoro nchebe eme ihe nwere ike inye aka belata ihe egwu ndị ahụ.
Gị Bochum Atụmatụ si Server Ọnọdụ
Mgbe ịzụrụ Bochum, ị na-azụta ohere nkịtị na sava ụlọ ọrụ. Weebụsaịtị gị ga-akawanye mma (ma ọ bụ njọ) maka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya dabere na ọnọdụ sava ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọta puku afọ iri ndị German na-achọ isi nri, ị ga-ahụ nsonaazụ dị mma na nsonaazụ ọchụchọ German ma ọ bụrụ na nnabata gị nwere ọnọdụ anụ ahụ nke eurozone (ma ọ bụ ka mma, German).
Iwu isi mkpịsị aka a na-agbasasị n'ogo mba ụwa niile. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ụlọ ọrụ nnabata nwere naanị ebe data na obodo ole na ole. Hà nọ na mba ma ọ bụ mpaghara ụwa zuru oke nke ndị na-ege gị ntị? Mmetụta ahụ nwere ike ịdị obere, n'ikpeazụ, ma ọ bụghị dị oke mkpa ma ọ bụ dị oke mkpa dị ka ịhazi aha peeji aha n'ụzọ ziri ezi: mana ọ eme mee mgbanwe.
Y’oburu n’acho iwelata nsogbu nke webusaiti nke akwadoro n’ebe di oke iche karie ndi gere gi nti, inwere ike igbali imeri nke ahu site n’itinye ihe omuma nke obodo ya na ihe omuma gi banyere uzo nke ibe gi, ibe ya na ihe ndi ozo. ederede SEO metụtara. Gbakwunye map google na ebe nrụọrụ weebụ gị nke na-egosipụta ọnọdụ dị nso na ndị na-ege gị ntị bụ nnukwu echiche!
Ọsọ nke Bochum gị na-eweta
Ọsọ nke ndị na-eweta Bochum gị na-agbakwunye budata na ebe ahụ: ịbịaru nso na ihe nkesa gị na ọnọdụ dị nso na onye ọrụ njedebe na-adọta weebụsaịtị gị, na-ekwukarị okwu, ngwa ngwa ibu ha dị. Mana nke ahụ bụ naanị obere mmewere nke nnabata ọsọ ọsọ nke nwere ike imetụta ọnọdụ gị na nchọta google.
Ihe ọzọ na - emetụta ọsọ bụ ihe nhazi nke ihe nkesa, yana kedu bandwidth na RAM websaịtị gị. Maka nke a, Bochum raara onwe ya nye bụ ihe niile ngwa ngwa karịa Bochum ekesara. Okwesiri ighota na karia ndi nleta na ebe nrụọrụ weebụ gi na-anata, ohere karie na ihe nkesa o gha acho: ya mere inwe ike gbasaa dika o choro kama ichoro gi na obere akụkụ nke ihe nkesa kesara n’agbanyeghi uzo ahia gi na ebe nrụọrụ weebụ gi di. Inweta bara ezigbo uru.
Ọ bụrụ na ị ka na-achọ nnabata, na-elebara ihe ndị a anya nke ọma nwere ike inye aka nye weebụsaịtị gị ohere dị mfe ebe SEO gbasara. Nakọta ngwugwu ngwugwu nwere ike imezu nchebe gị, ọnọdụ gị, na ọsọ gị niile iji jide n'aka na ị naghị amalite ọghọm. Mana ọ dị mkpa itinye nke a n'echiche: nnukwu ihe ndị metụtara SEO na webụsaịtị gị ga-abụrịrị ihe dị na saịtị.
Tags: Bochum atụmatụBochum atụmatụ ncheọsọ ọsọ na-eweta ọrụotúkedu ka oso ososo seosearch engine njikarịchaAseo osoọnọdụ savaoso seoweebụ Bochum